Maitiro EkuDhawunirodha VLC Media Player yeMac? - Pc
Maitiro EkuDhawunirodha VLC Media Player yeMac?
Kutarisira kutarisira kuwana VLC Media Player ye mac? Zvakanaka, nhasi kutsvaga kwako kuchasvika kumagumo. Isu takugadzirira yakazara mishumo yako iyo inosanganisira yakazara kuongororwa kweiyo VLC media player yeMac. Pamwe chete neizvozvo, isu takasanganisirawo nhanho nhanho gwaro rekumisikidza VLC paMac uye takataura zvimwe zvinonakidza maficha nezve VLC media player. Nekudaro, ipa iyi positi kuverenga kwakazara kuitira kuti iwe uzive zvese nezve VLC Media Player.
VLC Media Player - Ruzivo rwepfupi
Nezita racho, iwe unogona kunge watove watowana iyo VLC mutambi wenhau uyo ​​unoshandiswa kuona mavhidhiyo ari munharaunda anotorwa kuPc yako. Sezvo MacBooks iri kubvisa madhiraivha e disc kubva kune avo mamodheru, inouya neinobatsira kwazvo kushandisa software kuti ikubatsire kuona mavhidhiyo nemifananidzo.
Iyo yakazara fomu yeVLC ndeyeVhidhiyo LAN Mutengi, uye ndeye yemahara uye yakavhurika-sosi yekuyambuka-chikuva multimedia player uye fomati iyo inotamba yakawanda multimedia mafaera nyore. Iwe haugone kunetseka nezve vhidhiyo / odhiyo kana pikicha kuti ingavhure here kana kwete. Unogona kudhawunirodha VLC software pane chero chishandiso yemahara sezvo ichitsigira muchinjika-chikuva. VLC player inotsigirawo 4k uye 8k playback, saka mune ramangwana, kana iwe uchida kukwidziridza skrini yemac yako, saka unotova neiyo yakatsigirwa neVLC.
Yakanakisa iOS Emulator yePc (2020)
Nzira yekushandura M4A kuita MP3?
Maitiro ekuisa VLC Media Player Pane MAC
Ichi chikamu chichaona matanho ekurodha pasi VLC mutambi weMAC; inzwa wakasununguka kutevera.
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kushanyira iyo saiti yepamutemo yeVLC Media Player .
Bhura pasi pasi kusvikira wawana 'kurodha pasi VLC yeMAC.'
Dzvanya pane bhatani reorenji, iro rinoti, 'Dhawunirodha VLC,' ita shuwa kuti utore yazvino vhezheni yechiitiko chakanakisa; parizvino, iyo vhezheni iri 3.0.11.1 kubva muna 30/10/2020.
Isa pasuru yacho, uye wobva wagadzirira kuenda. Iwe unogona zvakare kutsigira kambani nekuvapa kwavari, asi izvo zviri kwauri iwe.
VLC Media Player Zvimiro:
Ndiyo imwe yevanonyanya kushandisa midhiya vatambi kunze uko. Iyo inotomboenda pahutachiona kuburikidza memes uye ndiyo yakanakisa kana zvasvika kuUI nekushanda. Kuti utarise kunyorera, vhura chero vhidhiyo pane chako chishandiso. Pazasi, iwe uchaona iyo mutambi iyo iwe yaunogona kudzora iyo yekutamba yevhidhiyo; bhendi repamusoro rine sarudzo dzakawanda, dzatichapfuura muchikamu chino. VLC inouya neakawanda kwazvo maficha anoita kuti ive yakanakisa yevamwe vatambi vhidhiyo. Heano mamwe maficha eVLC Media Player.
Chinhu chinotonhorera nezve VLC midhiya inoridza ndechekuti iro vhoriyamu rinoenda pamusoro pe100%, zvinoreva kuti kana vhoriyamu yeiyo vhidhiyo isina kunyanyisa kurira, iwe unozogona kuwedzera vhoriyamu uchishandisa chinotsvedza, uye VLC ichaitarisira. uye kusimudzira basa rako. Kana izvozvowo zvisina kukwana, iwe unogona kubaya pane izvo zvigadziriso uye marongero emhedzisiro mukona yepasi; ipapo, iwe unozogona kugadzirisa iyo yakaenzana, compressor, uye stabilizer mumasetingi. Iwe uchaona inotsvedza, uye iwe unogona kuchinja marongero nekusundidzira bhatani kumusoro kana pasi.
Kana iwe uchifunga kuti yako vhidhiyo yakasviba zvakanyanya kana kupenya kusingatsigire vhidhiyo, unogona kuenda kune vhidhiyo mhedzisiro sarudzo uye enda kune izvo zvakakosha sarudzo uye gadzirisa hue mhedzisiro kupenya musiyano, uye kuzadza zvinoenderana nezvinodiwa zvako zvakakodzera.
Izvo zvinoitawo sevhidhiyo mupepeti; uti iwe unoda kucheka zvimwe zvikamu kubva muvhidhiyo, enda kunoona> Advanced maitirwo> Ridza chikamu chevhidhiyo iyo iwe yaunoda kuisa, tinya pane tsvuku-yakaita denderedzwa bhatani bhatani kuti utange kurekodha uye kana iwe chikamu chapera tinya bhatani rakafanana kumisa kurekodha. Zvakafanana nechokurekodha asi cheMAC. Mushure meizvozvo, iwe unongofanirwa kutsvaga iyo mavhidhiyo gallery, uye iwe unozogona kuona iyo yakarongedzwa chikamu kubva kune huru vhidhiyo. Iwe unozongocheka iyo vhidhiyo chikamu kubva pane iripo vhidhiyo.
4. Nzira yakatenderwa
Chimwe chinhu chinotonhorera cheVLC midhiya mutambi ndechekuti iwe unozokwanisa kupisa chero mavhidhiyo, kuteedzera iyo link yeiyo vhidhiyo iwe yaunoda kuyerera paVLC, wozoenda kune vezvenhau, iyo inosarudza iyo sarudzo Vhura network rwizi, ipapo unogona kunama batanidza yakanangana nenzvimbo isina chinhu chero zvichizotora nguva kurodha, asi ichatamba, ita shuwa kuti une internet inokurumidza.
Uchishandisa chishandiso, iwe unogona zvakare kurodha pasi faira nekurekodha, uye ipapo vhidhiyo faira richave riripo pane yako system munharaunda. Semuenzaniso, kana iwe uchida mavhidhiyo paYouTube, unogona kuteedzera zvinongedzo uye nekuzvinamatira. Iwe unenge uchivashambadza ivo zvakananga kubva kuYouTube, hapana chikonzero chekushandisa yakaipa-yechitatu-bato software ku dhawunirodha mavhidhiyo .
Kana iwe uine vhidhiyo kamera (web kamera), iwe unogona zvakare kuzvibata pachako uchipa maitiro kumavhidhiyo. Kuti uwane iyo sarudzo, enda kune vezvenhau, wobva wasarudza yakavhurika kutora chishandiso, wobva pasi pechivharo chekutora pasi pezita rechishandiso, sarudza zita rechishandiso chako.
Inogona zvakare kushandiswa se vhidhiyo inoshandura . Ingo enda kune vezvenhau, wobva washandura uye chengeta, iwe uchaona yakavhurika midhiya, uye sarudza iyo midhiya faira iwe yaunoda kushandura, wobva wadzvanya pakushandura uye chengeta mushure meizvozvo iwe unogona kusarudza kubva kuzhinji sarudzo pasi pegadziriro banner, iwe unogona zvakare chinja kuva mp4 , OGG, uye toni yemamwe mavhidhiyo mafomati.
7. Musoro wetsigiro
Iwe unogona zvakare kuwedzera zvinyorwa zvidiki kune chero clip, enda kune iyo yekuwedzera manyorerwo sarudzo, tora iyo SRT faira yezvinyorwa zvidiki uye wobva wasarudza sarudzo kana pop up yauya; mushure mokunge ma subtitles awedzerwa, mharidzo icharatidzwa kumusoro kwekona yekona. Iwe unogona zvakare kudzvanya-kurudyi pane vhidhiyo.
7. Mavhidhiyo mazhinji pane imwecheteyo application
Iwe unogona zvakare kutamba akawanda mavhidhiyo mune akasiyana tabo nekutanga iyo application zvakare, wozodhonza uye udonhedze iyo faira iwe yaunoda kuona paVLC. Izvi zvinoponesa yakawanda nguva nesimba nekuti haufanire kutsvaga yako vhidhiyo mune rese dhairekitori.
Kana iwe uchida kutora inotyisa uye inotonhorera skrini kubva kuVLC, unogona kuzviita nekudzvanya pane vhidhiyo sarudzo uye nekudzvanya tora skrini.
Iko kune yekukurumidza yekuwana sarudzo zvakare kubva iyo iwe yauchazokwanisa kuwana nekukanda-kurudyi pane yako mbeva. Zvingave zviri nyore kwauri kuti uwane ako aunoda sarudzo uye uashandise ipapo ipapo. Zvinhu zvakaita sekuchinja huwandu hweiyo vhidhiyo zvinogona kuitwa nekuwana inokurumidza menyu.
· Iyo software inokupa sarudzo idzo pasina imwe vhidhiyo inoridza inozopa pa-nguva yekugadzirisa vhidhiyo, Online vhidhiyo kutenderera, maturusi epamberi ekugadzirisa ako ekuona ruzivo.
· Ndiyo imwe yeakanakisa anowanikwa uye anonyanya kudiwa vhidhiyo software mumusika.
· Iyo inokutendera kuti utore zvirimo wakananga kuchombo chako pasina kunetseka nezve chero chinhu.
· Iine yakachena-mushandisi-interface uye iri nyore kushandisa uye kuwanikwa.
· Ine sarudzo yakanaka kwazvo kune audiophile.
· Inowana inogadziridzwa yenguva dzose uye zvigamba zvekuchengetedza.
· Kana iro vhoriyamu rakakwenenzverwa kusvika pa200%, rinotadzisa kunaka kweruzha.
Mushure mekuverenga chinyorwa ichi, tinovimba kuti unogona kunge wakawana zano nezve izvo VLC. Iyo ine zvakawanda zvakanaka pane mamwe echinyakare evhidhiyo vatambi; uyezve, ndiyo inonyanya kuzivikanwa mutambi wevhidhiyo nerutsigiro kumusoro kusvika 8K zvine ramangwana, handiti? Saka, wakamirirei? Tevedza nhanho uye dhawunirodha iko kunyorera kweMac?
Kana iwe uine chero pfungwa kana mibvunzo zvine chekuita neVLC paMac, tiudze isu mubhokisi remashoko pazasi.
Netflix App yeMac
Mashandisiro Ekushandisa Alexa App paPC?
Ungawana Sei Yemahara PUBG UC?
Ungawana sei Chifuramabwe TV Mudzidzi Discount?
tarisa emahara emafirimu epamhepo fmovies
unblocked mitambo yemahara online mitambo
chinja youtube rwiyo kuva mp3
kadhi rezvipo remahara reAmazon
akachengeteka mawebhusaiti ekuona mafirimu
yemahara movie online yakazara yakazara
akanakisa emahara mawebhusaiti ekuona mafirimu